ရှညောသား: April 2012
ကျုပ်ရွှေညာသားလေး ရွာကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်မှာမို့ ကျန်နေသေးတဲ့ ရှု့ခင်းပုံလေးတွေနဲ့ အညာနွေနေပူအောက်က ပန်းလေးတွေကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ ပြောင်းဖူးမီးဖုတ်ပြီးသားကို သုပ်ထားတာရယ် နေ့လည်ခင်း အိပ်ချင်ပြေ မချစ်စု သရက်သီး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကို တိုင်မှာညက်အောင်ထုပြီး ဆားဖြူးထားတာရယ်ကို သုံးဆောင်သွားအုံးဗျာ...။ ရွာကပြန်ရောက်ရင် နောက်တစ်ပိုင်း ထပ်တင်တာပေါ့နော့...။
ရေလှောင်ဆည်ကနေ အခုလိုရေမြောင်းလေးနဲ့ သွယ်သွင်းယူသဗျာ....။
နွေရာသီတော့ နွေရာသီပါပဲ ဒါပေမဲ့ ရေနားနီးတော့ အခုလို စိမ်းစိုနေတာ မိုးတွင်းတမျှပေါ့...။
ချဉ်ပေါင်ပင်တွေကလည်း နုနုဖောက်ဖောက်မို့ ခူးချင်စရာ လက်ကိုယားနေတာပဲ... သူများအခင်းမို့ ဓာတ်ပုံပဲရိုက်ခဲ့ရတယ်လေ...။
အပေါ်ကပုံကတော့ ရေလှောင်ဆည်ပါ နွေရာသီဆိုတော့ ရေကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ...။
ဟော့သလို ပိုက်လေးနဲ့သွယ်ပြီးတော့ လွှဲယူကြတယ်ဗျ...။
အရီးလေးတို့ ယာခင်းဘေး ရိုးထဲက ကျောက်စက်ရေတွင်းလေးပါ...ရေကအမြဲတမ်း ပြည့်နေတာ ခပ်လို့မကုန်ဘူး သောက်လို့လည်းကောင်းတယ် အေးမြပြီး ကြည်လင်နေတာပဲ မှန်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာ...။
ရေပြည့်လာရင် ဘေးကမြောင်းလေးကနေ စီးထွက်သွားတာပဲ...။
ဒါကတော့ ရိုးရဲ့ အထက်ပိုင်းက ကျုပ်ဦးလေးတားထားတဲ့ ရေချိုးဖို့နေရာလေးပါ နွေနေပူပူမှာ ရေစိမ်လို့အတော်ကောင်းဗျာ...အေးစိမ့်နေတာပဲ...။ အထက်ကရေတွင်းလေးက အောက်နားက ကျောက်ခုံပေါ်မှာရှိပါတယ်...။
ဒီပုံလေးက အထက်ကရေလှောင်ဆည်ထဲကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ စီးဝင်နေတဲ့ သဘာဝရေထွက်လေးပါ...ဒီရေထွက်ရေကို ရွာအထိပိုက်နဲ့ သွယ်တန်းဖို့ ဆန္ဒရှိနေကြပေမယ့် ပိုက်ဆံအကုန်မခံနိုင်သေးတော့ ချောင်းထဲကရေကိုပဲ ပခုံးထမ်းနဲ့ သယ်နေကြရတယ်...။ ထီသာပေါက်ရင်တော့ သူတို့ဆန္ဒတွေ ဖြည့်ပေးနိုင်ကောင်းပါရဲ့ဗျာ...။
ဒါကတော့ ခါချဉ်ကောင်လေးတွေပါ...လူကိုများကိုက်ရရင် လေးပေါင်လေးဘက်ကားပြီး အသေခံကိုက်တယ်...။ ကြားဖူးတာတော့ ခါချဉ်ကောင် မာန်ကြီးလို့ တောင်ကြီးဖြိုမယ်ကြံ ခါးကမသန်ဆို လားပဲ...။ လူကိုကိုက်ရင်တော့ ခါးမသန်ပေမဲ့ အသေခံပြီးကိုက်တယ်...တော်တော်ဆိုးတဲ့ ဟာလေးတွေ...။
စာရေးသူ ရှညောသား at Sunday, April 29, 20123comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
အားလုံးသော အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေ မောင်နှမများအတွက် ရွာပြန်တုန်း လက်ဆော့လာခဲ့တဲ့ အညာနွေရဲ့ ရှု့ခင်းပုံးလေးတွေနဲ့ အညာနွေနေပူပူမှာ ပွင့်လန်းနေတဲ့ ပန်းလေးတွေကို အညာအလွမ်းပြေကြည့်နိုင်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီပုံလေးကတော့ အညာနွေ နေပူပူအောက်က ပုပ္ပားတောင်ကြီးရဲ့ပုံလေးပါ...
သူတို့လည်း နေပူပူမှာအလုအယက် စားနေကြတယ်....
ဒီပန်းလေးကတော့ ကျုပ်တို့ဆီမှာ နွားမဆေးပန်းလို့ ခေါ်ပါတယ် အပင်က ရဲယိုပင်နဲ့ဆင်တယ် အသီးလည်းဆင်ပါတယ်... ပန်းရနံ့ကတော့ သင်းသင်းလေးနဲ့ အတော်မွှေးပါတယ်...
ဒီပန်းလေးကတော့ လက်ထုပ်ပန်းတဲ့ နွေရာသီမှာ ပွင့်ပါတယ် သူ့အနံ့လေးကလည်း မွှေးမွှေးလေးနဲ့ အမောပြေစေပါတယ်...
ကျုပ်တို့ရွာ အရှေ့ဘက်က ချောင်းခုံပါ နွေရာသီမို့ ရေတွေခမ်းခြောက်နေပါတယ်... မိုးတွင်းဆိုရင်တော့ ခဲတွေမမြင်ရပါဘူး...ရေတွေအပြည့်ပေါ့....
လေးလေးတို့ ကြက်သွန်ခင်းမှာ ကြက်သွန်တူးနေကြတာပါ...ကျုပ်လည်းနှစ်ရက်ဆက်တိုက် ကူပြီးတူးပေးခဲ့ပါသေးတယ်....။
နေပူပေမဲ့ ကိုယ့်လယ်ယာကထွက်တဲ့ သီးနှံဆိုတော့လည်း အခုလိုပဲသိမ်းဆည်းကြရတာပေါ့... သူတို့အတွက်အမောပြေစရာတွေပဲလေ...
ဒါကတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း ဘယ်လိုမှစိတ်မထိမ်းနိုင်လို့ ခူးလိုက်တဲ့ နွေရာသီထွက် ဖရုံရွက်နဲ့ ဖရုံသီးနုနုလေးတွေပါ... အိမ်ရောက်တော့ အဖွားကို ဟင်းချိုချက်ခိုင်းတယ်...အဲ့ဒီညနေက စားလို့ကောင်းလိုက်တာများ မပြောပါနဲ့....
ရေကနည်းနေတော့ ကျောက်ခဲတွေက ချောင်းခုံတခုလုံးမြင်နေရတာ တစ်မျိုးလှသဗျာ...
ဒီအပင်လည်း လက်ထုပ်ပင်ပါပဲ..သူကတစ်နေရာမို့ ထပ်ပြီးရိုက်လိုက်တာ...
ကျောက်တုံးမျက်နှာပြင်က ညီညာနေတော့ အ၀တ်တင်လျှော်ဖို့အတွက် စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့...
ကျောက်ခဲကြားက ရေအေးအေးက ချိုးလို့အတော်ကောင်းသဗျာ.....
ပုံတွေအများကြီးကျန်သေးတယ် နောက်ရက်မှ ဆက်ပြီးတင်ပေးမယ်နော်...ကွန်နက်ရှင်က စိတ်မချရလို့ ပြီးသလောက်လေးပဲ တင်လိုက်တာ...နောက်ဆက်ပြီးတင်ပေးမယ်...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပုံလေးတွေကြည့်ပြီး တခုခု ကျေနပ်မှုရတယ်ဆိုရင် လက်ဆော့ရကျိုးနပ်ပါတယ်ဗျာ...
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, April 28, 20124comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မနေ့က သင်္ကြန်ထွက်လည်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ညနေဘက်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ မြို့ထဲကို လျှောက်လည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆောင်ကနေထွက်ခါစတော့ အေးအေးချမ်းချမ်းပါပဲ... မြို့ထဲရောက်တော့ ဆိုင်ကယ် အိတ်ဇောတွေကို ဖွင့်ပြီးအဖွဲ့လိုက် သောင်းကျန်းနေတဲ့ လူငယ်အများစုကို တွေ့ရတော့တာပါပဲ။ ရေပက်ခံရဖို့ထက် သူတို့ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ တိုက်မိမှာစိုးလို့ ရှောင်နေရတာက တစ်လမ်းလုံးဆိုပါတော့...။ တချို့က ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေ ခုန်နေသေးတယ် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ဆိုင်ကယ်စက်သံဆူညံနေတာက သင်္ကြန်ဆိုတာထက် လူငယ်တွေရဲ့ ဆိုင်ကယ် ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ စည်းကမ်းမဲ့စွာ စီးတဲ့ပွဲလို့နာမည်ပြောင်းရမလိုပါ။ ပျော်တာလဲပျော်ပေါ့လေ ဒါပေမဲ့ စည်းလွတ်ကမ်းလွတ်တော့ မဖြစ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကိုလည်း ဂရုမစိုက် အသံမျိုးစုံထွက်တဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ အဖွဲ့လိုက် အဖွဲ့လိုက် အော်ဟစ်နေတဲ့ လူငယ်အများစုကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဆိုးဆုံးက ဆိုင်ကယ်သံတွေပါ လူကြားထဲရောက်ရင် လီဘာကိုအတင်းဆွဲညှစ်တော့ အသံတွေက နားကွဲမတတ် ဆူညံလွန်းပါတယ်။ သူတို့တွေအတွက်တော့ သာယာတဲ့တေးဂီတသံ ထင်မှတ်ပြီး ကခုန်မြူးထူးနေတာပါပဲ။ တစ်ရက်လေး ထွက်လည်မိပါတယ် တစ်ခါတည်းကို စိတ်ကုန်သွားတာပဲဗျာ...
မြန်မာ့ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုမဟာသင်္ကြန် ဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ ရေပက်ဆော့ကစားတာက တော်တော်ကို ရှားနေပါပြီ။ တစ်နေရာမှာတော့ စင်တင်တေးဂီတနဲ့ ဖျော်ဖြေလေ့ရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ရှေ့က ရေကစား မဏ္ဍပ်ရှေ့ကို သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ လူတွေများလွန်းလို့ မဏ္ဍပ်ရှေ့ကဖြတ်ဖို့ နာရီဝက်လောက်စောင့်ရပါတယ်။ မဏ္ဍပ်ပေါ်မှာတော့ အမြင်မတော်တဲ့ အ၀တ်အစားတွေနဲ့ သင်္ကြန်အကဆိုတာနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ကကွက်တွေကို ကပြဖျော်ဖြေနေတဲ့ မိန်းမပျိုလေးတွေကို မြင်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လူစည်တာထင်ပါတယ်။
ကျုပ်က တောရွာသားစစ်စစ်ပါ အခုမှ မြို့ပေါ်မှာနေရတာ။ လူငယ်ဘ၀က ဖြတ်သန်းလာရသူတစ်ယောက်ပါပဲ လူငယ်သဘာဝ ပျော်ရွှင်တတ်တာကိုတော့ နားလည်ပေးပါတယ်။ တောမှာဆိုတော့ တောသဘာဝနဲ့ပဲ ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်ဆိုးဝါးတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုမျုိးကိုတော့ မခံစားချင်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်အတွက် ပျော်စရာဖြစ်ပေမဲ့ တခြားသူ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ပျော်စရာဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီကြားထဲ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှု ကြောင့် တပါးသူကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတာကလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးခြင်းမျိုးတွေပေါ့ လူကြားထဲရောက်လို့ ဆိုင်ကယ်လီဘာကို အတင်းဖိဆွဲပြီး အရှိန်မထိန်းနိုင်ရင် ဘေးကလူကိုတိုက်ဖို့က သေချာပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကိုလည်း နှစ်ခါသုံးခါလောက်လည်း မြင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျုပ်တော့ သူတို့တွေကြည့်ပြီး ကျောချမ်းမိတယ်။
သင်္ကြန်ကို မလည်ဖြစ်တာကြာလို့ မျက်စိစိမ်းနေတာပဲလားတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ မြင်တွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်း အတော်များများ ကတော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာနဲ့ တော်တော်လေးကို ကင်းကွာနေတယ်ထင်ပါတယ်။ မြို့ထဲ နေရာအတော်များများလည်လို့ အပြီးမှာတော့ ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် ချမ်းတာနဲ့ ကျုပ်တို့တွေ အဆောင်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
အဆောင်ရောက်တော့ ရေမိုးချိုးပြီး မိတ္တီလာကန် အနောက်ထိပ်က ဗဟိုရေကစား မဏ္ဍပ်ကို နောက်တစ်ခေါက် ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ မဏ္ဍပ်ရှေ့ရောက်မှပဲ သင်္ကြန်ဒိုးသံလေးကြားရတော့ သင်္ကြန်ဆိုတဲ့ အရသာကို ခံစားရပါတယ်။ သြော် ဒါမျိုးလေးတွေ ရှိသေးလို့ တော်သေးတာပေါ့လို့ စိတ်ထဲကရေရွတ်မိပါတယ်။ မိတ္ထီလာမြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်တွေက သင်္ကြန်ယိမ်းအကအဖွဲ့တွေ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ ကပြယှဉ်ပြိုင်ကြတာပါ။ မြန်မာဆန်ဆန် အ၀တ်အထည်လေးတွေ ကိုယ်စီဝတ်ဆင်ပြီး ညီညီညာညာ ကပြယှဉ်ပြိုင်တာကို မြင်ရတာဖြင့် ဘ၀င်အေးစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ ဆုပေးမဏ္ဍပ်ဖြစ်တာကြောင့် စနစ်ကျကျ ကပြယှဉ်ပြိုင်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုမဏ္ဍပ်မျိုးတွေ နေရာတိုင်းမှာ တိုးပွားလာအောင် လုပ်နိုင်ရင်တော့ မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန်ဆိုတာ ဒါပါပဲလို့ ပြောပြနိုင်စရာ ကျန်နေဦးမှာပါ...။
ဒီပို့စ်လေးက ရွှေညာသားလေး ကျုပ်ရဲ့ အမြင်မျှသာဖြစ်ပါသည်။ စာဖတ်သူ ကျုပ်မိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ သဘောမတွေ့ဘူးဆိုရင် ကျုပ်ကိုခွင့်လွတ်ပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ မြင်ခဲ့ရတာ၊ ကြားခဲ့ရတာ လေးတွေကို မျိုသိပ်မထားနိုင်လို့ သင်္ကြန်တွင်းအမှတ်တရ ပို့စ်လေးရေးလိုက်တာပါ။ ဒီပို့စ်ရေးနေတုန်းတောင် လမ်းပေါ်က ဆိုင်ကယ်သံဆူဆူညံညံတွေ ကြားနေရလို့ ကျောချမ်းနေမိတယ်။ အားလုံးသော ကျုပ်မိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ဘေးဘယာဝေးကွာ ကျန်းမားချမ်းသာကြပါစေဗျာ။
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, April 13, 2012 1 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ပြန်ရောက်ပြီဆိုလို့ ဘယ်မှ ဝေးဝေးလံလံ သွားနေတာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲ လုပ်စရာရှိတာလေးတွေ လုပ်နေရလို့ ဘလော့ခ်ကို ပြန်ရောက်ကြောင်းပြောတာပါ။ ဖေဖော်ဝါရီလထဲက စပြီးတော့ များလိုက်တဲ့အလုပ်တွေဗျာ... နားကိုမနားရဘူး...နောက်ဆုံးတော့ မနေ့က သင်္ကြန်အကြိုနေ့မှာပဲ ပြန်ရောက်တယ်။ ဒါနဲ့ ဒီနေ့တော့ ကွန်နက်ရှင်လေး ရတုန်း အွန်လိုင်းတက်ပြီး အိမ်ထဲကို ၀င်အုံးမှဆိုပြီး ရောက်လာတာ...ရွာပြန်ဖို့လည်း သင်္ကြန်တွင်းဆိုတော့ ကားတွေက အဆင်မပြေ... နှစ်လလောက် အသည်းအသန် ပင်ပမ်းထားတာမို့ သင်္ကြန်တွင်းတော့ အဆောင်မှာပဲ အေးအေးလူလူနေရင်း အနားယူမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ အဆောင်ကလည်း အေးအေးလူလူရှိတာကတော့ ပြောမနေပါနဲ့ တစ်ဆောင်လုံးမှ တစ်ယောက်ထဲ... ဘုတ်ဘုတ်တို့ အဖွဲ့တွေရှိလို့ တော်သေးတယ်...သင်္ကြန်နဲ့ မထိတွေ့ရတာလည်း သုံးနှစ်လောက်ကြာသွားတော့ မနေ့က သင်္ကြန်အကြိုနေ့ မန္တလေးကအပြန်လမ်းမှာ ရေပက်ခံရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းချက်ဗျာ.... သင်္ကြန်ရေက အေးမြနေတာပဲ... ဒီနေ့ညနေပိုင်းတော့ မိတ္ထီလာသင်္ကြန်ကို လည်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်... ညကျရင် အတွေ့အကြုံလေးတွေ ပြန်ပြော ပြမယ်ဗျာ...
စာရေးသူ ရှညောသား at Thursday, April 12, 20122comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook